အောင်​မြင်​တဲ့ အဆို​တော်​​တွေရဲ့ ​နောက်​ကွယ်​က ပဲ့ကိုင်​ရှင်​တစ်​ဦးဖြစ်​တဲ့ ​တေး​ရေးဆရာကြီး ​ရွှေ​ဂျော်​​ဂျော်​က​တော့ အနုပညာကို ချစ်​မြတ်​နိုးသူတစ်​ဦးမို့ သီချင်း​ကောင်း​လေး​တွေကို ဖန်​တီးရင်း ​ပျော်​​နေသူတစ်​ဦးပါ။ ရင်​ထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်း ပွင့်​ပွင့်​လင်းလင်း ​ပြောဆိုတတ်​တဲ့ ​တေး​ရေးဆရာ ​ရွှေ​ဂျော်​​ဂျော်​ရဲ့ စိတ်​ဓာတ်​ကို​တော့ ပရိသတ်​​တွေကလည်း သ​ဘောကျကြပါတယ်​။ လတ်​တ​လောမှာ​တော့ ဆရာ ​ရွှေ​ဂျော်​​ဂျော်​က​ ဒီ​နေ့​ခေတ်​ ဂီတ​လောကမှာ ​တွေ့​နေရတဲ့ အမှား​တွေအ​ကြောင်း ဟာသ​လေး​နှောပြီး ဒဲ့​ပြောချလိုက်​တာ​ကြောင့်​ ပရိသတ်​​တွေသာမကပဲ အဆို​တော်​​တွေကလည်း ​တော်​​တော်​​လေးလက်​ခံသ​ဘောကျ​နေကြတာ ​တွေ့ရပါတယ်​။ မိုမို​လေးချစ်​ပရိသတ်​​တွေအတွက်​ ဒီ​နေ့​ခေတ်​ ဂီတ​လောကမှာ ​တွေ့​နေရတဲ့ အမှား​တွေအ​ကြောင်း ​ပြောလာတဲ့ ​တေး​ရေးဆရာ ​ရွှေ​ဂျော်​​ဂျော်​ရဲ့စာ​လေးကို ​ဖော်​ပြ​ပေးလိုက်​ပါတယ်​​နော်​။
​တေး​ရေးဆရာ ​ရွှေ​ဂျော်​​ဂျော်​က​တော့ 'Tragicomic2019 သင်္ကြန် အပြီး အိမ်ကို ကောင်မလေးတယောက် နဲ့ သူ့အမေ သီချင်းလာအပ်တယ် ။ ကောင်မလေး အသံ နားထောင်ကြည့်တော့ ကောင်းသားဘဲ ဒါပေမယ့် သင်္ကြန်မှာ အလကားဆိုဘို့တောင် ပွဲလေး တရက်မှ မရခဲ့ဘူးလို့ ညည်းနေရှာတယ် ။ အဲဒါနဲ့ သေချာမေးကြည့်တော့မှ .. သူတို့ သားအမိ အားနည်းချက်တွေ အပြစ်တွေပေါ်လာတယ် ။ကိုယ့်လူမျိုးနဲ့ တိုင်းပြည်မျက်နှာ ကို မထောက်တဲ့ သားအမိ ဗျာ။ မေးကြည့်တော့ ပေါ်လာတော့တာပေါ့။" နေစမ်းပါဦး သမီးက သီချင်း ဆိုတာ ဘာနဲ့ ဆိုရတယ် ထင်နေလို့လဲ ? " " အသံ နဲ့ ပါ " " ဟဲ့ သီချင်းဆိုတာ ဖင် နဲ့ ရင် နဲ့ ဆိုရတာဟဲ့ ။ဘာ အသံနဲ့ ဆိုရမှာလဲ ? ဒီ နိုင်ငံမှာမွေး ဒီ ရေသောက်ပြီး ကိုယ့်ဘဝကို နားမလည်ဘူး ။ လူသစ်တန်း အဆိုတော် လုပ်နေပြီး .. " " ဟို သမီး က အသံ .. " " ဘာ အသံလဲ ? အသံ ဆိုတာ ပိတ် ပိတ်ပြီး ပါးစပ်လှုပ် ဆိုရတာလေ .. ဒုက္ခပါဘဲ နင်အဲဒါကြောင့် ပွဲမရတာ" တော်တော် ဒူတဲ့ သားအမိဘဲ ။ မျက်နှာငယ်လေးတွေ နဲ့ ထိုင်နေကြတယ် ။
အဲဒါနဲ့ ဆက်မေးရတယ် ။" ပြီးတော့ သမီးတိုသားအမိ သူများတွေလို မကြိုးစားကြဘူးလားကွ ဟေ? " " ရှင် ဘာကိုပြောတာလဲ ? " " ဩော် လူသစ်လုပ်နေပြီး စောက်ပေါသူဌေးတယောက်ယောက် ပိုင်တဲ့ စောက်ပေါ Channel တခုခု ကစောက်ပေါသီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲ တခုခုမှာ ဝင်မပြိုင်ဘူးလား? လို့ မေးနေတာ ရှင်းလား ? " " ဟုတ် သမီးက အေးဆေးဘဲ ကိုယ့်သီချင်းလေးတွေကိုယ်ကြိုးစားဆိုချင်တာနမပြိုင် .. " " ဟဲ့ ကိုယ့် သီချင်း ကိုယ် ကြိုးစား ဆိုချင်ရအောင် .. နင် က အရူးလား ? နာမည်ကြီးပြီးသား သီချင်းတွေ ယူဆိုလိုက် ... ဟော .. ပွဲပါဝိုင်းငှားကြရော .. " " ဟိုလေ .. သမီးက သမီးကိုယ်ပိုင် သီချင်းအသစ်လေးတွေ နဲ့ ပရိသတ်တွေ ကို ဖျော်ဖြေချင် .. " " ဩော် ပြောလေကဲလေ တယ်ခက်ပါလား ?ပရိတ်သတ် ကို မစော်ကားပါနဲ့ ။ ပရိတ်သတ်က သူတို့ ကြိုက်ပြီးသား သီချင်းအဟောင်းတွေကို အဆိုကျော်အစစ်လောက် မကောင်းတဲ့ ကောင်လေး ကောင်မလေးတွေ ဆိုပြတာကို ကြည့်ချင် နားထောင်ချင်နေကြတာလေ .. သမီး Keyမဝင် စာသားမှားတောင် ... သူတို့က သမီးတို့ သားတို့ရဲ့ ဘယ်နေရာကို ကြည့်ကြည့်ပြီး ကြိုက်နေမှန်း မသိ ကြိုက်နေကြလိမ့်မယ် " " ကိန် ! သမီးက Keyတော့ဝင်ပါတယ် ဦးရယ် " " အေး အဲဒါကြောင့် နင် သင်္ကြန် ပွဲမရတာပါ ဆို "
အဲဒီအခါ သူ့ အမေလည်း မျက်စိပျက် မျက်နှာပျက်နဲ့-" အဲဒါ ဆို ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ ဆရာရယ် ။ နည်းလမ်းကောင်းလေးများ ရှိရင် .. " " ဟုတ်ပြီ ခင်ဗျား အခု ဘာရောင်းလဲ ? " " ရှင် ကျမဝန်ထမ်းမို့ ဘာမှ မရောင်း .. " " တယ် ! ခင်ဗျားကိုက မဟုတ်တာ ။ ကိုယ်က အရပ်ထဲ ပြောင်းဖူးပြုတ်လေးတောင် မရောင်းဘဲနဲ့ ကိုယ့်သမီးကို နိုင်ငံကျော် အဆိုတော်ဖြစ်ချင်လို့ ရမလား ? ။ တော်တော် အတင့်ရဲတာဘဲ " " အဟင့် ..ရွှတ် ကျမ အပြစ် ကျမသိပါပြီ ဆရာရယ်။မနက်ဖြန် မုန့်လက်ဆောင်း လည်ရောင်းပါတော့မယ် " " ဒီလိုမှပေါ့ဗျာ ။ ပရိတ်သတ်ဆန္ဒ ကို လေးစားပါ "ကိုင်း ! ပြည်သူ့ ဆန္ဒကို အလေးထား , တိုင်းပြည် မျက်နှာကိုထောက်ရှုတဲ့ သားအမိဖြစ်ပြီး ပြန်သွားကြပြီ။ပြန်ခါနီး ကောင်မလေး က ပြောသွားသေးတယ် ။" ကျေးဇူးနော် ဦး ။ ဒါဆို သမီး ဦးကို သီချင်းအသစ်တွေ မအပ်တော့ပါဘူး ။ ပွဲရအောင် ဦးရေးပြီးသား မနီနီခင်ဇော်တို့ မဝိုင်းစုခိုင်သိန်းတို့ သီချင်းတွေဘဲ ယူဆိုလိုက်တော့မယ်နော် ။ တာ့ တာ " " လခွမ်း ဘဲဟေ့ .. နောက်ရေးမယ့် သီချင်းနာမည် ပြောပါတယ် ... " " ရှင် " " ဩော် ကြိုးစားလို့ ပြောတာ သမီးရယ် ။ နောင်နှစ်ကျရင် Key ဝင်မှန်း မဝင်မှန်းတောင် မသိတဲ့ စောက်ပေါ Channel တွေ မဏ္ဍပ်တွေက သမီးကို သီချင်းဆိုဘို့ ငှားကြပါစေလို့ .." * ( ဟာသ တဝက် နဲ့ ခံစားစေချင်လို့ပါဘဲ) (အမှားတွေ ပြင်နိုင်ကြပါစေ ကျနော်အပါအဝင်) Shweggtragicomic19" ဆိုပြီး ဟာသ​လေး​နှောပြီး​တော့ ထိထိမိမိ ​ရေးသားထားတာပါ။
မိုမို​လေးပရိသတ်​​တွေက​ရော ဒီ​နေ့​ခေတ်​ ဂီတ​လောကမှာ ​တွေ့​နေရတဲ့ အမှား​တွေအ​ကြောင်း ဒဲ့​ပြောချလိုက်​တဲ့ ​တေး​ရေးဆရာ ​ရွှေ​ဂျော်​​ဂျော်​ရဲ့အမြင်​ကို ဘယ်​လိုထင်​မိလဲဆိုတာ ​ပြောသွားခဲ့ပါဦး​နော်​။
Source:Shae Gyaw Gyaw's Facebook